"Ndị mmụọ ọjọọ na -atụ egwu mgbe niile", akụkọ nke onye na -apụ apụ
di Davide Sabbatini - Ọktoba 14, 2021
N'okpuru ebe a bụ ntụgharị asụsụ Italiantali nke ọkwa onye exorcist Stephen Rossetti dere, bipụtara na webụsaịtị ya, na -atọ ụtọ nke ukwuu.
M nọ na -agbada na paseeji nke ụlọ dị egwu nke ukwuu na otu n'ime mmụọ mmụọ mmụọ anyị nwere onyinye. Anyị na -eme atụmatụ ịchụpụ ụlọ ahụ obere oge. Ọ gwara m, sị: “Ọ dị m ka ọ dị m. Ha na -eti mkpu n'egwu. ” M jụrụ, sị: "N'ihi gịnị?". Ma ọ zara, sị: "Ha maara ihe ị na -eme".
Na mkparịta ụka gbasara ozi a, ndị mmadụ na -ajụkarị m: "Dị ka onye na -achụpụ mmụọ na -eche ndị mmụọ ọjọọ ụjọ, ị naghị atụ egwu?". M na -aza: “Ee e. Ọ bụ ndị mmụọ ọjọọ na -atụ ụjọ ”.
N'otu aka ahụ, m na -ajụkarị ndị nwere ihe ha na -eche ka ha na -abịarute ụlọ ụka anyị maka ịpụ apụ. Ọ bụghị ugboro ugboro, ka ha na -abịaru nso, ka egwu na -atụ ha. Ana m akọwara ha na mmetụta ndị a bụ nke inwe mmụọ ọjọọ. Ụjọ na -atụ ndị mmụọ ọjọọ maka ihe na -aga ime.
N'okpuru mkparị na nganga niile nke Setan na ndị na -ejere ya ozi bụ egwu dị egwu zoro ezo nye Kraịst na ihe niile dị nsọ. Ọ na -ebutere ha mgbu na -enweghị atụ. Ha makwa na “oge ha dị mkpụmkpụ” (Nkpughe 12,12:8,29). Ụjọ na -atụ ha maka ọbịbịa Kraịst nke ugboro abụọ. Dị ka ndị mmụọ ọjọọ Legion sịrị Jizọs: "Ị bịara ịta anyị ahụhụ tupu oge a kara aka?" (Matiu XNUMX:XNUMX).
Ikekwe otu n'ime mmejọ nke oge anyị bụ inye Setan na ndị mmụọ ọjọọ ya otuto. Ndị mmụọ ọjọọ na -ewe naanị iwe, na -eme mkparị, na -eme ihe ọjọọ, obere ihe e kere eke nwere ike ibute ọgba aghara, iwe na mbibi. Enweghị obi ike n'ime ha. N'okpuru ya niile, ha bụ ndị ụjọ.
N'aka nke ọzọ, a na -ewuli m elu mgbe mgbe site na obi ike nke ndị nwere abịakwute anyị, ọtụtụ n'ime ha dị obere n'ime afọ 20 na 30. Ndị mmụọ ọjọọ na -akwa ha emo, na -eyi ha egwu ma na -emekpa ha ahụ. N'etiti oke arụrụala ha, ha na -enupụrụ ndị mmụọ ọjọọ isi ma gwa ha ka ha pụọ. Mme demon ẹsio usiene ẹnyụn̄ ẹnam mmọ ẹbọ ufen. Ma ndị a anaghị ada mbà.
Ọ bụ agha. Ndị mmụọ ọjọọ na -atụ ụjọ enweghị ike ịsọ mpi na mkpụrụ obi mmadụ nwere obi ike, juputara n'ike na ntụkwasị obi nke Mmụọ. Obi abụọ adịghị onye ga -emeri n'ikpeazụ.